9:31 AM ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) No comments
Android Recovery Combo Keys ( Android ဖုန်းများ recovery mode ဝင်နည်းများ )
Movie တွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ် ပေးမယ့် Ashampoo Movie Studio 1.0.1.15 (167MB)
Apple Developer Site အားတိုက်ခိုက်ခံရ
၂၅.၇.၂၀၁၃ တွင်ဖြန့်ချိမည့် တန်ဖိုးနည်း GSM နှင့် CDMA သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများသိရှိစေရန်
WiFi Key Recovery For Android (WiFi Password မေ့သွားရင်)
Zombie Highway Mod Apk v1.6 Unlocked All Items
GSM , WCDMA , CDMA , 1500 တန် CDMA 800 Mobile Phone တွေအားလုံး အတွက် Internet Setting ချိန်နည်းများ
မြန်မာအလုပ်သမားများအတွက် အထူးလျှောက်ထားခွင့် လက်မှတ်ခ မလေးရှားလ၀က ရှစ်ဆခန့်မြှင့်
လက်ချောင်းဖြင့် တစ်လောကလုံးကို ဖန်တီးမည့် နည်းပညာ
APK ဖိုင်လ်တွေကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကွန်ပျူတာကနေထည့်မယ်
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ System Processor ကို Intel® Core™ i5,i7,i11 ထိတိုးချင်ပါသလား ?
ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်း ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ တိုင်းလို့ရတဲ့ Application
Shweyoe Dictionary Version 3.0 for window
Prince of Persia Shadow&Flame v1.0.0 (Unlimited Money)
Posted: 25 Jul 2013 06:29 AM PDT
Android ဖုန်း recovery ဝင်နည်းများကိုအောက်မှာ DOC file
Samsung, Sony, HTC, Acer, Dell, Motorola, LG, Toshiba
Posted: 25 Jul 2013 06:20 AM PDT
Movie တွေကို ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ချင်သူများ အတွက် နံမည်ကြီး Ashampoo Movie Studio 1.0.1.15 တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Movie တွေကိုဖြတ်ညှပ်ကတ် လုပ်တာ၊ Transition Effects ထည့်တာ၊ စာတန်းထိုးတာ၊ Background Music ထည့်တာ၊ Size လျှော့ချတာ၊ မကြည့်ချင်တဲ့ကြေငြာတွေကို
ဖြတ်ထုတ်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Window 8 မှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Posted: 25 Jul 2013 05:33 AM PDT
Apple မှ၎င်းတို့၏ developer site အားတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ခိုးယူခံရသော အချက်အလက်များမှာ code များဖြင့် ၀ှက်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း
Site မှာမှု ပြန်လည်မသုံးနိုင်သေးကြောင်းသိရသည်။ Apple ၏အဆိုအရခိုး၍ ၀င်ရောက်သူများသည် developer များ၏ အချက်အလက်များကို
ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး developer site ကိုပိတ်ပစ်ရရန်ရည်ရွယ် ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ကြာသပတေးနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထို အဖြစ်အပျက်တွင်
အရေးကြီးသော အချက်အလက် များကို code ဖြင့် ၀ှက်ထားခဲ့သော်လည်း developer အချို့၏ အမည်နှင့် e-mail များကိုမှု ရရှိသွားနိုင်သည်
ဟု Apple ကဆိုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း မရှိစေရန်အတွက် developer system တစ်ခုလုံးအား အစအဆုံးပြင်ဆင်နေပြီး မကြာခင်
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု Apple ကဆိုသည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအတွက်လည်း Apple မှ တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့သည်။ Apple ၏
developer site သည် third-party software ဖန်တီးသူများအတွက်ဖြစ်ပြီး ကြာသပတေးနေ့ကတည်းက ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။
Apple မှာ iOS နှင့် OSX အသစ်ထုတ် လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် developer များ မှ ပြင်ဆင်နေချိန်၌ ၄င်းတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Credit : NetGuide Journal
Posted: 25 Jul 2013 05:30 AM PDT
၂။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် CDMA 800 MHZ (MEC Tel) မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် GSM မိုဘိုင်းဖုန်းများကို ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားရန်
စီစဉ်လျှက်ရှိရာ လက်ရှိတပ်ဆင်ပေးထားသော လိုင်းအင်အားနှင့် အမှန်တကယ် သုံးစွဲနေသောအခြေအနေ များအရ ကယားပြည်နယ်နှင့်ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် တပ်ဆင်ပြီး GSM ရေဒီယို လက်ကျန်လိုင်းအင်အား နည်းပါးနေပါ၍အဆိုပါဒေသတွင် လိုင်းကျပ်မှုများကြောင့် ဆက်သွယ်မှု အဆင်မပြေမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် အတွက် GSM SIM Card အရေအတွက် လျှော့ပေါ့ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဒေသများတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို လက်ရှိထပ်မံတပ်ဆင်ပေးနိုင်မည့် လိုင်းအင်အားအခြေအနေအရ အချိုး ကျခွဲဝေပြီး တပ်ဆင်ပေးရန် လျာထားတွက်ချက်ထားပါသည်။
၄။ ပြည်သူများသက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပါ၍ဖုန်းကဒ်ဝယ်ယူထားသည့် နေ့မှစ၍
(၁၅)ရက်အတွင်း တယ်လီဖုန်း SIM Card တွင် မူလထည့်သွင်း ပေးထားသည့်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခ ၃၀၀ကျပ်မကုန်မီ တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲသူသည် အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ကျပ် တန် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ဖြင့် ငွေဖြည့်သုံးစွဲရမည်။ SIM Card ကို အခြားသူတစ်ဦးဦးသို့ လက်ဆင့်ကမ်း ရောင်းချခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက် ၁၅ရက်အတွင်းအသုံးပြုခြင်းမရှိပါက အဆိုပါဖုန်းကဒ်သည် အလို အလျောက်လိုင်းပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted: 25 Jul 2013 04:48 AM PDT
ဒါလေးကတော့ Android ဖုန်း / Tablet တွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် WiFi Password မေ့သွားရင် အလွယ် ပြန်ရှာနိုင်တဲ့ App လေးပါ...ဟိုနေ့က တင်ပေးထားတဲ့ နည်းလေးက အလုပ်ရှုတ်ပါတယ် ဒါလေးကတော့ လွယ်တာလေးမို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... သူ့ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ ဖုန်း/Tablet က Root လုပ်ထားဖို့ လိုမှာပါ...။
** You need to have connected to the
network in the past.
** This app cannot "hack" into an
I cannot help you with getting root. Have
a look at http://forum.xda-
developers.com for that.
Have you ever forgotten the password of
your home WiFi network, or the one you
setup for your parentsafew months
This application will help you recover the password ofawireless network you have connected to with your device
You can then either tap on an entry to copy it, or export the list to SD, or share it using the standard Android
Posted: 25 Jul 2013 04:39 AM PDT
NetGuite ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဒဟူးနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ NetGuide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ NetGuide Journal Vol(2), Issue (94)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 25 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted: 25 Jul 2013 04:14 AM PDT
သဲထိပ်ရင်ဖိုGame တွေကစားရတာကိုကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်။ Game အလန်းလေးတစ်ခုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကားမောင်းရင်းနဲ့ ကားပေါ်ကို ခုန်တက်လာတဲ့ သူရဲတွေကို ပစ်ခတ်ပြီး သတ်ရတဲ့ Game ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရုပ်ထွက်ရောအသံပါ အတော်လေးတော့လန်းပါတယ်။ အဆင့် လိုက် ကစားရမယ့် Game ဖြစ်ပြီး အဆင့်တွေမြင့်လာလေလေ သူရဲတွေကို ပစ်ရခက်လေလေဖြစ်မှာပါ။ သူရဲတွေကိုနိုင်အောင်မပစ်နိုင်ရင်တော့ မိမိစီးလာတဲ့ကားကို ၀ိုင်းပြီးမှောက်ကြမှာပါ။ တကယ့်ကို အသဲအ သန် ကစားရမှာနော်။ Android OS 2.3.1 နှင့် အထက် Phone များမှစပြီးကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Posted: 25 Jul 2013 02:50 AM PDT
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးထားလို့ တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... မြန်မာပြည်မှာ နေတာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်တိုင် ရှင်းမပြနိုင်တာ နားလည်ပေးပါ...:)
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Mobile Phone ရဲ့ Notification Bar အပေါ်နေရာလေးမှာ အပေါ်တက်အောက်ဆင်းပုံစံမျိုး Icon မြှားလေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ GSM Network သုံး Mobile Phone တွေမှာ Internet စတင် အသုံးပြုလို့ရပါပြီဗျာ။(မှတ်ချက် - ဒီ Setting အတိုင်းချိန်လိုက်ရင်လိုင်းဆွဲအားကောင်းမွန်တဲ့ 3G Network ကိုလဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Proxy - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
Port - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
Username - Yekyawphyo@c800.mm (Yekyawphyo ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိကြိုက်တာရိုက်ပါ။)
Password - မိမိ စိတ်ကြိုက် လျို့ဝှက်နံပါတ်တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
Server - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
ဒါဆို အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါပြီ။အဲ......ကျွန်တော် တစ်ခု သတိပေးချင်တာကတော့ ဖုန်းတွေက အမျိုးအစားတွေ အများကြီးဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြောတဲ့နည်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေချင်မှပြေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်မပျက်ဘဲ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ဥာဏ်စွမ်း ဥာဏ်စလေးတွေနဲ့ ဖြည့်တွေးပြီး ကလိကြပေါ့ဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Internet Setting စတင် ချိန်မယ် ဆိုပါကသမရိုးကျနည်းအတိုင်းပဲ စပါမယ်။ Data Enable ကို On ထားပါမယ်။ထိုနောက် Wireless and Network Settings>Mobile networks>Access Point Names ကို ၀င်ပါမယ်။Menu key ( မျဉ်းလေးကြောင်းထပ် ပုံကလေးပေါ့) ကို နှိပ်ပြီး New APN ကို ရွေးပါမယ်။ ထို့နောက် Name, APN, usernameနှင့် Prompt password ကိုသာ ထည့်၍ Save လုပ်ပါ။ Restart ချပေးပါ။
Name - Mectel (or) Card
Username - mectel@c800.mm (or) card@c800.mm
Password - 123 (or) 12345 (or) card
Server - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MMSC - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MMS Proxy - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
MMS Port - ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့။
Authentication type - PAP or CHAP (or) CHAP
APN type - ပုံမှန်အားဖြင့် မလိုအပ်ပါဘူး။(Default ကိုသာ ထည့်ပေးပါမယ်။)
Data bearer - မလိုပါ။
ဒါလေးကတော့ Myanmar Mobile User Group က မျှဝေထားတာလေးပါ... တလက်စတည်း Share ပေးလိုက်ပါတယ် .....
Credit : Myanmar Mobile Application Store
Posted: 24 Jul 2013 10:49 PM PDT
Posted: 24 Jul 2013 07:07 PM PDT
ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှစ၍ မလေးရှားနိုင်ငံ ပူထရာဂျာရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ပြန်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားအား အထူးလျှောက်ထားခွင့်လက်မှတ်ကို ပတ်စ်ပို့ရှိသူနှင့် မရှိသူ နှုန်း ထားနှစ်မျိုးခွဲလိုက်ပြီး ပတ်စ်ပို့ရှိသူများ ပြန်ရန်အတွက် အထူးလျှောက် ထားခွင့်လက်မှတ် ရင်းဂစ် ၂၂၀၀ ကောက်ယူကာ ပတ်စ်စ်ပို့မရှိသူများကို ရင်းဂစ် ၃၀၀၀ သို့ အသီးသီးပြောင်းလဲ ကောက်ခံလိုက်ပြီး နေ့ချင်းပြီး လက်မှတ်ထုတ်ပေးကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က နှုန်းထားခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ရင်းဂစ် ၄၀၀ နှင့်သာ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ယင်းလက်မှတ်ရရှိပြီးမှ သာ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ပြန်ရန် နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (CI) ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်မှုများမှာ ပတ်စ်ပို့ရှိသူများ၊ ပတ်စ်ပို့မရှိ၍ CI လျှောက်ထားပြီး ပြန်သူများမှာ ပူထရာဂျာရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရုံးသို့ သွားရောက်ပြီး Special Pass လျှောက်ထားရန်အတွက် တိုကင်ယူကာ ပြန်လည်ချိန်းဆိုသောနေ့တွင် လက်မှတ်ခ ၄၀၀ ရင်းဂစ် ပေးဆောင်ရသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲကောက်ခံလိုက်ခြင်းကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မည့် အလုပ်သမားများမှာ အောက် လမ်းမှပြန် ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
“လက်မှတ်ခ ၃၀၀၀ ရင်းဂစ် ဆိုရင် မြန်မာငွေ ကျပ် ကိုးသိန်း ကျော် ဆယ်သိန်းနီးပါးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်လစာရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀င်ငွေက စားသောက်စရိတ်နုတ်ပြီး စုနိုင်ရင် တစ်လ ၆၀၀ ရင်းဂစ်ပေါ့။
မြန်မာတွေ ဒုက္ခတော်တော်ရောက်နေတယ်။ ခုပြန်မယ့်သူတွေ အောက်လမ်းကပြန်ဖို့လုပ်နေတယ်”ဟု မလေးရှားနိုင်ငံ ဧဒင်ဥယျာဉ်သတင်းဌာနမှ ကိုမျိုးကပြောသည်။
အဆိုပါပြောင်းလဲကောက်ခံမှုသည် အလုပ်သမားအခက်အခဲများကြောင့် မပြန်နိုင်ရန်အတွက် ယခုလိုတိုးမြှင့်ကောက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုမျိုးက ၄င်း၏ အမြင်ကိုပြောသည်။
“ပြန်ချင်တဲ့သူတွေက ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီး အရင်က ရင်းဂစ် ၄၀၀ ပဲပေးရတော့ သက်သာတာပေါ့။ ခုတော့ ပြန်ချင်ရင် အောက်လမ်းကနေပဲ ပြန်ရတော့မှာပေါ့။
ဆယ်သိန်းကြီးကျတော့လည်း မတတ်နိုင်ကြဘူး””ဟု မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော ကိုစန်းမျိုးကပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသော မြန်မာအလုပ်သမားများအားပြည်တော်ပြန်ရန်အတွက် စင်းလုံးငှား အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း (MAI) သည် ဇူလိုင် ၁၆ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် အခမဲ့နှစ်ကြိမ်သာ ပျံသန်းပေးတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်း (MAI) မှ ဈေးကွက် မန်နေဂျာ ဒေါ်အေးမရသာကပြောသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရောက်ရှိသူများမှာ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်ထိ ၃၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရန်အတွက် မလေးရှား ရှိ မြန်မာသံရုံးတွင် လူဦးရေ ၂၅၀၀ ၀န်းကျင် စာရင်းပေးပို့ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မေ၂၉ရက်မှစ၍မလေးရှားနိုက်ငံတွင် မန်မာနိုင်ငံသားများ အကြမ်းဖက်ခံရမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ ပြန်ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုအကြမ်းဖက်ခံရမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ခုနစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ရှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Ref : 7Day News Journal
Posted: 24 Jul 2013 12:55 PM PDT
လက်ချောင်းဖြင့် တစ်လောကလုံးကို ဖန်တီးမည့် နည်းပညာ SixthSense
ဒီနည်းပညာလည်း တော်တော်ကို လေးစား အံ့သြရမယ့် နည်းပ ညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ဖော်ပြ သခဲ့တာ ဖြစ်
ပါတယ်။ လက်ချောင်း လေးများပေါ်မှာ ယင်း ပစ္စည်းလေး စွတ်ထားရုံနဲ့-
- သတင်းစာပေါ်မှာ ရုပ်လုံးရုပ်ကြွနဲ့ စာများ ဗီဒီယိုများ မြင်တွေ့ရပါမယ်။
- လက်ချောင်းလေးချောင်းကို လေးထောင့်ပုံစံ လုပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင် ပါတယ်။
- စာရွက်ပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့နိုင်ပါမယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်ပါမယ်။ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
- စာကြည့်တိုက်ဝင်တဲ့အခါ ဘယ်စာအုပ်ပဲဖတ်ဖတ် သူ့ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာရွက်ပေါ်မှာ အလိုအလျောက် ပေါ်စေပါမယ်။
အစရှိသဖြင့် သုံးလို့ကို မကုန်နိုင်တဲ့ Function ပေါင်းများစွာကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ကူဆုံး ဥပမာ ကတော့ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး တီထွင်လိုက်တဲ့ နည်းပညာက စာရွက်ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်ထားပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ ဘာပဲ ရေးရေး ကွန်ပျြူတာ မျက်နှာပြင်က Note pad မှာ ရေးသလိုပဲ စာလုံးတွေပေါ်ပါမယ်။ ရုံးအဝင်အထွက် လက်မှတ် ထိုးတာတို့၊ လက်ဗွေနှိပ်တာတို့ကို လုပ်သလိုကစတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တော့ ဘာကြိုးမှ ဆက်စရာမလိုပဲ Wireless နည်းပညာနဲ့ Xbox တို့လို ဂိမ်းအတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့  လှုပ်ရှားမှုကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Xbox က လှုပ်ရှားမှုကို အသုံးပြုရုံပါပဲ။ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တပ်လိုက်တာကတော့ လှုပ်ရှားမှုအပြင် လက်ညိုးက တစ်ချက် ကွေးဆန့်လုပ်လိုက်ရင် ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင်မှာ ကလစ်တစ်ချက်ထောင်သလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက လိုသလို Option ပေးလို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့ ကွန်ပြူတာ တောင် မလိုတော့ပဲ ပရိုဂျက်တာ သေးသေးလေး တစ်လုံး ရှိရင်ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ချောင်းများရဲ့  လုပ်ရှားမှု sense ကို အသုံးပြုပါမယ်။ အသံရဲ့ တုန်ခါမှု၊ Sound wave လည်းပါဝင်ပါမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့  လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို Track လုပ်လို့ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အိပ်ကပ်ထဲက ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာကို ထုတ်ဖို့ ပျင်းတယ်ဆိုရင် လက်ချောင်းလေးကို ကင်မရာပုံစံလုပ်ရိုက်ရုံနဲ့ ကင်မရာထဲမှာ အလိုအလျောက်ဝင်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်မကတဲ့ အဆင့်ပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီအတွက် ထပ်မံ အဆင်မြင့်တင်လို့ တကယ့် လက်တွေ့ဘဝမှာ အသုံးချနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလျက် ရှိပါတယ်။ ဒါကို SixthSense လို့ခေါ်ပြီး ဖန်တီးသူကတော့ အမေရိကန်က MIT Meida Lab မှ အိန္ဒိယလူမျိုး Phd ကျောင်းသား Pranav Mistr ဆိုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Pranav ရဲ့  ရှင်းလင်းပြသမှုကို အောင်ပါ လခ့်မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
Credit : ရိုးရာလေး
Posted: 24 Jul 2013 12:54 PM PDT
Apk လေးတွေကို ဖုန်းမှာ ကွန်ပျူတာကနေ Install ဖို့ ဆော့ဖ်ဝဲသေးသေးလေး တစ်ခု ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲကလည်း သေးတယ်။ အသုံးပြုရ၊ ဒေါင်းရ လွယ်ကူမှာပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူ
တာနဲ့ ချိတ်၊ ပြီးရင် ကိုယ် Install ချင်တဲ့ Apk ကို Drag ဆွဲပြီး ဆော့ဝဲထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ အရမ်း
Download => Link 1 | Link 2
Credit : http://mobilemyotaw.tk/?p=178
Posted: 24 Jul 2013 07:16 PM PDT
အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် ဖတ်ပြီးတော့ တကယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်...ဟီးး Fake ပါ.. သူငယ်ချင်းတွေကို စ,နောက်ဖို့သက်သက်ပါ...
မေးထားလို့ လေ့လာပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
မိမိတုိ့ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ CPU Processor ကို ကိုယ်ပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို စ,နောက်လို့ရပါတယ်...ဥပမာ မိမိစက်က “Intel® Core™ i5 @ 2.00GHz” ဆိုပါစို့ အဲ့ဒါကို "Intel® Core™ i11 @ 2.60GHz " မျိုးထိ မိမိ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ... Registry ထဲမှာ ဝင်ပြင်ပေးရမှာမို့ အမှားမခံပါဘူး.. အဲ့ဒါကြောင့် အောက်မှာ နည်းလမ်း (၂) ခုကို မူရင်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်တာပါ.... လုပ်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်....:)
Fool Your Friends With Intel® Core™ i11 Processor
So follow the simple steps given below:-
* First open run by using Win+R combination.
* Type “Regedit.exe” (without qoutes) and press OK.
* After Pressing OK, Registry Editor is open and expand the tree in following order.
* In0folder “ProcessorNameString” String there is my default processor name “Intel® Core™ i5” .
* Now Double Click On “ProcessorNameString” String and change the value data accordingl.
* My default processor name “Intel® Core™ i5” Processor and I want to change it to “Intel® Core™ i11” . So, I change the value data to “Intel® Core™ i11” And Hit OK
* Now Check your computer properties, By Right clicking on Computer icon and select properties.
* Now you will see in Processor field the name of desired processor is shown.
ဒီ နည်းလမ်းမှာတော့ အပေါ်နားက service pack 1 ကိုပါ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်...။
Show Fake System Properties in Windows 7
Changing The Processor Name And Its Speed
Step 1: First, you need to open regedit.exe.
Click the Start button type "regedit" and hit Enter.
Step 2: When the registry editor window appears on your screen go to the path given below.
Note: If your processor has2cores it will appear as0and 1.
Step 3: Go to the panel on the right side of the registry editor main window and find ProcessorNameString on the value section then double click it and another window will appear. This is where you can edit the name of your processor and its speed by typingafalse information that will appear on your system properties.
As shown in Picture 3.
Step 4: After you type your desired name and speed click OK button.
Step 5: Click the start button on the right panel of the start menu you can see Computer right click on it and click Properties or click Computer and another window will appear then right click on it then choose Properties. Another window will appear where you can see the difference in your System Properties.
As shown in Picture 5.
Changing The Service Pack of Your Computer
As shown in Picture 2b.
Step 3: Go to the panel on the right side of the registry editor main window and find CSDVersion on the value section then double click it and another window will appear. This is where you can edit your service pack number or you can put another word or phrase eg. your name, that will appear in the system properties.
Step 4: After you type what name or number you want click OK.
As shown in Picture 4b.
Step 5: Click the start button and LogOff your computer, click your user account then LogIn again. Click the start button on the right panel of the start menu you can see Computer right click on it and click Properties or click Computer and another window will appear then right click on it then choose Properties. Another window will appear where you can see the difference in your System Properties.
Note: This will not take effect unless you log off your computer.